upper tamakoshi hydal project(upper tamakoshi hydal project) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
upper tamakoshi hydal project
जिरी । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई अर्को सफलता मिलेको छ । माथिल्लोे ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानका लागि पाइप जोडिएको छ । एउटा पाइप माथिबाट तल सफलतापूर्वक पुर्याएसँगै जडानकार्य पनि शुरु भएको हो। लामो समयको प्रयासपछि अत्यन्तै जटिल र चुनौतीपूर्ण ठाडो सुरुङको दुवैमा पाइप जडान शुरु भएको हो । मङ्गलबार माथिल्लो ठाडो...
‘सुनको अण्डा’ दिने भनिएको अपर तामाकोशी ऋणले थिचियो, लागत बढेर रु. ७४ अर्ब पुग्ने !
काठमाण्डौ । सस्तो लागतको आयोजना भनी अपर तामाकोशीमा लगानी गर्नेहरुले पछुताउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । कारण, यो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा स्रोतको अभावसँगै १० अर्ब थप ऋणमा पर्ने भएको छ । विभागीय मन्त्रीद्वारा नै ‘सुनको अण्डा’ दिने आयोजना भनी प्रचार गरिएको यो आयोजनामा ऋणको भार थपिँदै गएको हो । संसोधित लागत समेत बढेर माथि पुग्ने...
अपरको सेयरमूल्यमा पोजिटिभ सर्किट, 'शिवम प्रवृति'कै पुनरावृति त होइन ?
काठमाण्डौ । शिवम सिमेन्ट लिमीटेडको सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट आउँदा अपर तामाकोशीको सेयर चाहि एकाएक चम्किन थालेको छ । अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य दैनिकजसो बढ्नु र बुधबार त कारोबार सुरु भएको केही मिनेटमै पोजिटिभ सर्किट लाग्नु पछाडि ठूलो कारण केही देखिएको छ । शिवममा जसरी हल्लाले काम गर्यो, अपरमा पनि त्यस्तै दृश्यहरु देखिएका छन् । अपर...
'सुनको अण्डा' दिने भनिएको माथिल्लो तामाकोशीमा पैसा अभाव, थप ८ अर्ब ऋण माग
-रमेश लम्साल काठमाडौँ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई नगद प्रवाहको समस्या देखिएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । ‘गोरखा भूकम्प’ले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग नयाँ बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर भएको र निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्कामा मूल्य...
काठमाण्डौ । लगानीकर्तालाई 'सुनको अण्डा' दिने आयोजनाको रुपमा चर्चा गरिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगतिले गुणात्मक फड्को मारेको छ । सरकारको सार्थक प्रयासपछि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा गुणात्मक प्रगति देखिएको हो । यो आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ ।...
२२ मिनेटमै दिनलाई रात बनायो नेप्सेले, अपर तामाकोशीको सेयरमा यो हदको चलखेल !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेडका केही कर्मचारी र सेयर माफियाको मिलेमतोमा अनलाइन कारोबार प्रणाली बन्द गराई अपर तामाकोशीको हजारौं कित्ता सेयरमा चलखेल भएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई मूर्गा बनाई नेप्सेका कर्मचारी र वाइको नै लागेर अपर तामाकोशीको सेयर एकाएक सिस्टम नै बन्द गरी खुद्रा सेयर बिक्रीको अर्डर...
नेप्सेमा गिरावट, चलखेलको पोल खुलेपछि अपर तामाकोशीको उल्टो यात्रा !
काठमाण्डौ । बजार परिसूचक(नेप्से) कारोबारको पहिलो दिन आइतबार ८.६ अंकले घटेको छ । नेप्सेको कारोबार प्रणाली ‘थोत्रो रेल’ झै बिग्रिएपछि लगानीकर्ताको मनोबल घट्यो, जसले कारोबार सुरुवातमा बढिरहेको बजारलाई बन्द हुँदा घट्ने अवस्थामा पुर्याइदियो । कारोबार भइरहेको अवस्थामा नेप्सेको ‘विश्वस्तरीय’ भनी दाबी गरिएको कारोबार प्रणालीमा...
अपर तामाकोशीको मूल्य बढाउन मार्केट डेप्थमा यस्तो खेल
काठमाण्डौ । अपर तामाकोशीको सेयर मूल्य विभिन्न गिरोहहरुको मिलेमतोमा सुनियोजित ढंगले बढाउने खेल भइरहेको छ । बजारमा उच्च खरीद चाप देखाएर कम्पनीको मूल्यमा तीव्र चलखेल भइरहेको हो । यही चलखेलका कारण आइतबार कारोबार खुलेको केही मिनेटमै यो कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजिटिभ सर्किट लाग्यो । मूल्यमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएपछि...
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार बजार नखुल्दै अपर तामाकोशीको सेयरमा उच्च खरीद चाप देखिएको छ । कम्पनीको सेयरमा खरीद अर्डरको थुप्रो लागे पनि बिक्री गर्ने भने कोही देखिएको छैन । यो कम्पनीमा उच्च खरीद चाप रहेका कारण बिहीबार बजार खुलेको केही मिनेटमै १० प्रतिशतको हाराहारीमा सेयर मूल्य बढिसकेको छ । कम्पनीको मूल्य १०...
‘सुनको अण्डा’ साबित भो अपर तामाकोशीको आइपीओ, ३ दिनमै रु. १९.१७ अर्बको रिटर्न !
काठमाण्डौ । आइपीओले लगानीकर्तालाई कसरी मालामाल बनाइदिनसक्छ भन्ने कुरा अपर तामाकोशीले पुष्टि गर्न थालेको छ । यो कम्पनीको आइपीओले लगानीकर्ताहरुलाई ३ दिनको अन्तरालमा १९ अर्ब ३७ करोड रिटर्न दिएको छ । जुन झट्ट सुन्दा अपत्यारिलो लाग्नसक्छ । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको आइपीओले कारोबारमा आएको ३ दिनमै लगानीकर्तालाई १८३...
माथिल्लो तामाकोशीको सेयर कारोबारमा, सुरुवाती मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयरको आइतबारदेखि कारोबार सुरु भएको छ । यो कम्पनीको सेयरलाई नेप्सेले गत शुक्रबार सूचिकृत गरेको थियो । कम्पनीले दोश्रो बजारमा कारोबार गर्न UPPER सिम्बोल पाएको छ । नेप्सेले सुरुवाती कारोबारका लागि यो कम्पनीको सेयरमूल्य रु. ७४.८९ देखि २२४.६७ रुपैयाँको रेञ्जमा...
शुक्रबारदेखि बजारमा एकैपटक १०.५९ करोड कित्ता सेयर थपिँदै
काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर शुक्रबार सूचिकरण हुने भएको छ । यो कम्पनीले केही दिनअघि सूचिकरणका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएको थियो । आवश्यक कागजातको अध्ययनपछि नेप्सेले सूचिकरणका लागि स्वीकृति दिएको हो । अब सो कम्पनीको शेयर आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा कारोवार हुनेछ । स्टकका अनुसार रु १०...
काठमाडौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको १० करोड ५९ लाख कित्ता शेयर सूचीकरणका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आवेदन दिएको छ । स्टकका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीका अनुसार आवश्यक कागजातको अध्ययनपछि बढीमा सात दिनभित्र सो कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोवार हुनेछ । स्टकका अनुसार रु १० अर्ब ५९ करोड बराबरको शेयर एकै पटक धितोपत्र...
यहाँबाट हेर्नुहोस् अपर तामाकोशीको आइपीओ रिजल्ट
काठमाण्डौ । माथिल्लो तामाकोशीको साधारण सेयर बाँडफाँड भएको छ । बबरमहलस्थित एक होटलमा माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओ बाँडफाँड गरिएको हो । यो कम्पनीले निश्कासन गरेको कुल १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्तामध्ये सर्वसाधारणका लागि १ करोड ५० लाख ९० हजार ७ सय ५० कित्ता सुरक्षित गरेको थियो । कुल ३ लाख ३९ हजार ७ सय ७५ जनाले सेयर खरीदका लागि आवेदन...
तामाकोशीको आइपीओ एकमहिनाभित्र लिस्टिङ गर्ने घोषणा
काठमाण्डौ । केहीबेरअघि बाँडफाँड सम्पन्न भएको माथिल्लो तामाकोशीको साधारण सेयर एक महिनाभित्र लिस्टिङ हुने भएको छ । साधारण सेयर निश्कासनको क्रममा सहप्रबन्धकको काम गरेको सनराइज क्यापिटलका सीइओ विजयलाल श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओ १ महिनाभित्र नेप्सेमा लिस्टिङ गराई कारोबारका लागि योग्य...